सुन अहिलेसम्मकै महंगो, तोलाको ६५ हजार
मूल्य बढ्यो कारोबार घट्यो
बुधवार, असार १८, २०७६ सेतोखरी
नेपालगन्ज: मूल्य अत्यधिक मात्रामा बढेपछि नेपालमा सुनको कारोबार घटेको छ । कारोबार घटेपछि गहना किन्ने ग्राहकको संख्यामा कमी आउँदा सुन व्यवसायी पनि मर्कामा परेका छन् ।
विगतका वर्षमा यस मौसम (जेठ, असार,साउन) मा दैनिक ४० देखि ४५ केजीसम्म सुन नेपाली बजारमा खपत हुने गरेको थियो । हाल सुनको भाउ बढेपछि दैनिक १० देखि १५ केजीसम्म मात्र खपत हुने गरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए ।
गत साता नेपालमा छापावाला सुनको मूल्य ईतिहासकै सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुग्यो । असार १० (आईतवार) गते सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ६५ हजार ५ सय थियो, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हो ।
यसअघि सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ६३ हजार ३ सयसम्म पुगेको थियो । २०७० भदौ १२ र गत फागुन ८ गते सुनको मूल्य सो विन्दुमा पुगेको थियो । २०७३ मा भने सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ४७ हजार २ सयसम्म झरेको पाइन्छ ।
यस हप्ता पनि सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ६५ हजारबाट शुरू भएर मंगलवारसम्म आउँदा रू. ६४ हजार ५ सयमा झरेको छ । तर, मूल्यमा अस्थिरता र ग्राहकको कमीलेसुनको कारोबारमा भने सुधार आउन सकेको छैन । सुनका गरगहना किन्ने भन्दा उल्टै विक्री गर्ने ग्राहकको संख्या बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस अवस्थामा आफूले विक्री गरेको गरगहना मात्र खरीद गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यका अनुसार अहिले नयाँ गहनाको निर्माण र विक्री लगभग ठप्प छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले ग्राहकहरू आवश्यक परेमा मात्र सुन किन्न आउने गरेको बताए । नयाँ गहना चाहिने ग्राहकले पनि आफ्नै सुन अथवा पुुराना गहना लिएर आउने गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चका महासचिव खेम तिरुवाले बैंकमा रहेको सुन खरीद गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । व्यवसायीले बैंकबाट मात्र सुन खरीद गरेर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
सुन व्यवसायीका अनुसार मूल्य बढेपछि सुनको कारोबार खस्किएको बताए । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारअनुसार नै निर्धारण हुन्छ । विगत केही महीनादेखि शुरू भएको अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्ध अझै साम्य भएको छैन । साथै, पारमाणिक सम्झौताको विषयमा अमेरिका र इरानबीचको विवाद लगायतका कारणले पनि विश्व अर्थतन्त्र तथा शेयर बजारमा ह्रास आइरहेको छ । त्यसपछि शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सुन किनेर होल्ड गर्ने गरेका छन्, जसका कारणले विश्वबजारमा नै सुनको मूल्य बढेको छ । त्यसको प्रभावले नेपालमा पनि सुनको मूल्य आकाशिएको पूर्वअध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ ।
मंगलवार साँझ ७ बजेसम्म अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔंस १ हजार ३९१ डलर ५७ सेन्ट रहेको छ । गत असार १० गते भने अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔंश १ हजार ४१४ डलर ९० सेन्ट सम्म पुगेको थियो, जुन सन् २०१३ मे १४ यताकै उच्च हो । एक औंशमा २८ दशमलव ३५ ग्राम सुन हुन्छ । हालै जापानमा सम्पन्न शक्तिशाली २० राष्ट्रको सम्मेलनपछि भने विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार आउने देखिएपछि सुनको भाउ घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।
महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध र इरान र अमेरिकाबीचको विवाद कायमै रहेमा नेपालको सुनचाँदी व्यवसायी संकटमा पर्नेे बताए । उनले भने, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोलाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिङफिङ बीचको भेटवार्ताले विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार आउने देखिन्छ । तर, उनीहरूको ठोस निर्णय सार्वजनिक नहुँदा अन्योल भने कायमै छ ।’
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को शुरूदेखि नै विश्व बजार र नेपालमा सुनको मूल्यमा उतावचढाव कायम नै छ । तर, सुन आयातमा भने कमी देखिएको छैन । गत आव २०७४/७५ मा नेपालमा रू. ३२ अर्ब २० करोडको सुन आयात भएको थियो, तर चालू आवको १० महिनामा नै रू. २९ अर्ब ४४ करोडको सुन आयात भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, असार १८, २०७६, १२:०७:००
४३ करोड रकम अपचलन गरेको अभियोगमा नेपालगन्जस्थित सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडका चार जनालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्न आदेश दिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
नेपालगन्जमा धेरै शाखा रहेको कान्तिपुर ईलेक्ट्रोनिक्स प्लाजाले ल्याएको दशैंतिहार अभियान अन्र्तगत खरिद भएका सामाग्रीहरुबाट एकजना ईन्डोनेशियाको बाली टूरको पुरस्कार जित्न सफल भएकाछन् । पुरा पढ्नुहोस्